Ọrụ - Raymin Ngosipụta Ngwaahịa Co., Ltd.
Echiche na imewe
E nwere nanị ọtụtụ sekọnd na ndị ahịa na-enye gị. Ha ga - abụrịrị ndị ị na - azụ ahịa ma ọ bụrụ na ị ga - adọta ha iji bulie ngwaahịa gị. Ihe ngosi dị mma nke ire kaadiboodu ma ọ bụ akwụkwọ nchịkọta nwere ike ime nke a maka gị.
Enweghị usoro azịza dị mma n'okwu nzụta. Nke ahụ bụ otu esi gosipụta ihe ngosipụta anyị - iji mee ka ọ pụọ iche dịka akara na ngwaahịa gị. Anyị na-agbaso mkpa gị ma rụkọta ọrụ iji tinye echiche okike anyị na ọrụ ahụ. Naanị anyị maara na nsonaazụ ga-eju gị anya. Ajuju ndi a bu, kedu ka esi acho ihe kacha mma kwesiri gi?
Have nwere imewe-na-ebipụta imewe?
Dị egwu, anyị nwere ike ịmebe gị ka ị bụrụ eziokwu site na nka gị. A ga-enye gị ihe nlele mock ma eleghị anya site na ndụmọdụ ndị ọkachamara anyị.
Na-eche nsonaazụ ikpeazụ?
Echegbula. Anyị nwere onye mmebe 3D ga-enyere gị aka ịme 3D ịtọpụta isi na echiche gị ma ọ bụ eserese wdg.
Ma ọ bụ na ị nweghị echiche na niile?
Enweghị nsogbu, zitere anyị nkọwapụta ngwaahịa gị, gwa anyị ọtụtụ kwa FSDU chọrọ itinye ngwaahịa ahụ. Anyị ga-ahaziri gị azịza maka gịanyị ọkachamara aro. Na afọ nke ahụmahụ na-eke Pop ngosipụta na retail nkwakọ, anyị bughi imewe otu ama-etinye atụmatụ na dị iche iche nke ọrụ. Raymin Display team team ugbu a na-enye azịza ọkachamara nye ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama.
Inwe ụdị ihe owuwu ahụ abụghị naanị nzube, anyị na-achọkwa ime ka ọ baa uru. Site na ahụmịhe nke imepụta ụdị ngosi dị iche iche, Raymin Display raara onwe ya nye iji ụzọ kachasị akụ na ụba iji wuo ihe ngosi. Anyị na-echekwa ọnụ ahịa onye ahịa anyị ma chekwaa gburugburu ebe obibi site na iji obere akụrụngwa ma dochie ihe mejupụtara plastik na ihe eji emegharị emegharị.
Jiri Anya nke Uche Na-egosipụta Ya
Tupu ịmalite ime ihe nlele, a ga-enye onye ahịa ahịa 1: 1 ihe ngosi 3D iji nweta ihe ngosi nke ngosipụta ahụ. Ọ dị mfe karịa ndị ahịa na-esite na mba ndị ọzọ iji nweta nnabata ngwa ngwa maka nnwale.
Nyefee Ngwa ngwa
Plain white sample bụ ike okokụre n'ime 1-2-arụ ọrụ ụbọchị mgbe agba sample nwere ike 2-3-arụ ọrụ ụbọchị.
Free sample n'Aka
Ihe nlere anyị bụ n'efu nye ndị ahịa anyị ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ịtụ anyị.
Ngosipụta Raymin nwere ụlọ ọrụ na-achịkwa usoro niile n'ime ụlọ, hụ na anyị nwere ụkpụrụ kachasị mma na arụmọrụ iji nweta ihe ngosi na nkwakọ ngwaahịa gị ozugbo enwere ike. Anyị nwere onwe anyị dechapụ ebi akwụkwọ igwe, nnukwu-size auto laminating igwe, akpaaka anwụ-ịcha igwe, ect. Dabere na ihe ndị a, anyị na-enwe ike ijikwa ụgwọ ma mepụta ngosipụta na nkwakọ ngwaahịa karịa ngwa ngwa ndị ọzọ.
Ogo na mgbe erechara ya bụ ihe kachasị mkpa
Anyị na-na-agbasosi ike na "Ogo na Mgbe-ire Service bụ ihe kasị mkpa ihe" azụmahịa okwukwe. Gbaso ISO 9001 quality management system, anyị wuru a siri ike QC otu, itinye management ma ngwaahịa mma na-arụ ọrụ usoro.
Ebe obibi akwụkwọ
1 × KBA Rapida 162 5C Offset Press, Mpempe Akwụkwọ Nha 1220 × 1620
1 × KBA Rapida 145 5C Offset Press, Mpempe Akwụkwọ Nha 1060 × 1450
2, Komori Lithrone S40 5C Offset Press, Mpempe akwụkwọ Nha 720 × 1020
1, Akwụkwọ Reel Sheeter, Mpempe akwụkwọ Size 1700 (W)
1, Akwụkwọ cutter, mpempe akwụkwọ Size 1680 × 1680
1, Auto Laminating Machine, mpempe akwụkwọ Size 1220 × 1620
1, Auto Laminating Machine, mpempe akwụkwọ Size 720 × 1020
1, Corrugated arịọnụ Machine, mpempe akwụkwọ Size 1650 × 1650
2, Corrugated arịọnụ Machine, Mpempe akwụkwọ Size 720 × 1020
Centerlọ Ọrụ Dijitalụ
2, Epson 7910 Agba Gosiri Digital Press, mpempe akwụkwọ Size ka 610
1, Rzcrt-1813E Digital cutter
1 × Cartons, kaadiboodu Nguzogide Broken Meter Machine
1, ink adhesion ọkọ Testing Machine
Ọnwụ-Mbe, Fkpakọba & Gluing
1, Auto Die-Cutting Machine, Mpempe akwụkwọ Size 1220 × 1620
2, Auto Die-Cutting Machine, Mpempe akwụkwọ Size 720 × 1020
3, Ọkara-Auto Die-Cutting Machine, mpempe akwụkwọ Size 1200 × 1620
1, Auto Box ịkpakọba na Gluing Machine, Mpempe akwụkwọ Nha 1100 × 1100
1, Auto Box ịkpakọba na Gluing Machine, Mpempe akwụkwọ Nha 780 × 780
Iji chekwaa ego ị na-akwụ maka mbukota, ụfọdụ ndị ahịa na-ahọrọ iji ngwugwu ha gosipụta site na Ngosipụta kaadiboodu. Nke a na-emekarị ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ụdị ngwaahịa agwakọtara n'ime FSDU.
Ọrụ Mgbakọ Anyị:
· Nchekwa nke ngosipụta na ngwongwo
· Na-ejuputa ihe ngosi ọ bụla site na ngwongwo
· Odori na obere pallets
· Ibu na mbukota na ọkọlọtọ pallets
· Nnwale njem
· Nchekwa nke njikere pallets
Clientsfọdụ ndị ahịa na-achọkwa ịpị 1 ma ọ bụ ọtụtụ ihe ngosipụta n'ime otu katọn yana mpempe akwụkwọ ntụzịaka nzukọ.
Factorylọ ọrụ anyị na-ebi na Foshan, nke dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen. Ọ dị mma maka anyị ịpụpụ POS niile. Anyị na-enye oke mmiri, mbupu ikuku na nnyefe awara awara, dịka ihe ị chọrọ.
Adreesị: Ala nke isii, Nr. 6348, Bao'an Ave., Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CN 518103